Pagelines 2.0 Reinvents WordPress Them na Ecommerce | Martech Zone
WordPress gara n'ihu na-arụ ọrụ dị egwu… ọ bụghị naanị imelite usoro ikpo okwu ha kama n'ụzọ ha meghere ya n'ezie maka njikọta ndị ọzọ. Ihe mgbakwunye na Gburugburu maka ikpo okwu dị ebe niile, ha dịkwa ọnụ ala. Businesseslọ ọrụ ọhụụ amalitekwala n’elu ikpo okwu, Ntọala ịbụ otu n'ime ha! Companylọ ọrụ ahụ dị nnọọ mpako ịkpọsa mwepụta nke Pagelines 2.0, usoro isiokwu na-agbanwe WordPress.
Ntọala 2.0 na-etu ọnụ maka atụmatụ ndị a:
Dọrọ & Dobe Mere Right - N’ikpeazụ! Ikpokoro-na-dobe ikpo okwu nke na-enye gị ohere iwu weebụsaịtị na ụzọ ọkachamara. Usoro mbu nke nwere “ngalaba” dọkpụrụ adọpụ adọpụ nke ọkachamara web-design.
Nwepụta na-eme mgbanwe - Peeji nke usoro ga-agbanwe uche na mkpebi nke ihe nchọgharị gị na ngwaọrụ gị.
Nhazi okirikiri - Naanị ịdọrọ & dobe iji dozie akụkụ nhazi ọdịnaya gị. Wee họrọ nke ọ bụla n'ime nhọrọ nhazi 5 gị na ibe peeji nke ibe.
Nkebi nkebi - Oyiri ngalaba nke mere na i nwere ike iji ha otutu ugboro na otu peeji nke. Akụkụ nke ọ bụla na-enweta nhọrọ nke aka ya ma na-achịkwa onwe ya.
Typography - Họrọ si n'elu 50 web-mma na Google Akara ókwú. Kpamkpam gbanwee ọdịdị nke ihe odide weebụ gị na sekọnd.
Ijikwa Pụrụ Iche - Ugbu a ị nwere ikike ịchịkwa ụdị akwụkwọ niile. Na 2.0 ha na-ewebata Peeji Pụrụ iche iji nyere gị aka ijikwa ibe dị ka otu, na ebe ndebe ihe.
Njikwa agba - Jiri akara agba ịgbanwe palette nke saịtị gị na sekọnd. I nwekwara ike igbanwe usoro nhazi ma tinye onyonyo nzụlite.
Ntọala 2.0 na-akwado mgbakwunye iji jikọta ikpo okwu ecommerce nke ha. Nke a bụ nke abụọ ecommerce ngwugwu m na hụrụ (WooCommerce bụ nke ọzọ).
Nke kachasị mma, Ntọala nwekwara ndị ọrụ nkwado ndị ahịa, ọgbakọ ndị ọrụ yana nkwa ịkwụ ụgwọ ego ụbọchị 30. Anyị bụ ndị nnukwu Fans (na ndị mmekọ) nke Pagelines, edeela banyere ịtụnanya ha dọrọ & dobe WordPress ikpo okwu tupu.
Tags: isiokwuwordpress dọrọ na dobeWordPress ecommercewordpress ụlọ ahịaisiokwu mkpadondenye ederede
Nigel Skeet kwuru
Dec 22, 2011 na 7:38 PM
Site na ebe ikpo okwu WordPress kachasị elu n'ebe ahụ, ana m atụ aro ndị ahịa m niile PageLines. Na 2.0 emeela ka ị wuo nnukwu weebụsaịtị na WordPress ọbụna ihe ọchị! Hụrụ ngwaahịa na nkwado!
Dec 22, 2011 na 9:19 PM
Ekwenyere m - anyị wuru isiokwu mbụ anyị maka onye ahịa ma hụ ya n'anya!